‘वर्गाकार’ आमा : रुचाउलान् नयाँ सिनेमटोग्राफी ट्रेन्ड ?
‘लप्पन छप्पन २’ गीत ‘झुसे बारुलो’ लन्च (भिडियो)
दयाहाङले थाले ‘२ नम्बरी’ छायांकन
अनमोल स्पष्टीकरण : पटकथा मन नपर्दा फिल्म छाडेँ
दयाहाङको ‘नीरफूल’ रिलिज रोकियो
26th March 20200कोरोना उपचारमा खटिने डाक्टरलाई पीपीइ बनाउँदै प्रबल गुरुङ
20th March 20200मिस नेपाल सेल्फ–क्वारेन्टाइनमा !
19th March 20200दस फिल्मको रोकियो रिलिज, रिलिज क्यालेन्डर प्रभावित
By soniya on	 1st January 2020 Highlights, नेपाली, समाचार
पछिल्लो समय वर्गाकार सिनेमटोग्राफीको ट्रेन्ड विश्व फिल्ममा छ । हलिउडका डीओपी यसतर्फ लोभिएका छन् । वाइड दृश्य अब उनीहरुको रोजाइमा पर्न छोडेको छ । यसमा उनीहरुका आफ्नै तर्क छन् ।
नेपालमा दीपेन्द्र के खनालले यो ट्रेन्डलाई पछ्याएका छन् । यी निर्देशक एवं छायांकारले आफ्नो पछिल्लो फिल्म ‘आमा’लाई यसैगरि खिचेका छन् । हुन त क्यामेराको सेटिङअनुसार फ्रेम सिर्जना गर्नु नौलो होइन । यद्यपी, यसलाई प्रयोग चाहिँ मान्न सकिन्छ ।
‘अझै गहिरोरुपमा दर्शक र पात्रबीच सम्बन्ध बनाउन खोजेको हुँ’ मूभिमान्डुसँग खनालले भने, ‘वर्गाकार फ्रेमले दर्शकलाई पात्र र फिल्मको मनोविज्ञानमा लिएर जानेछ ।’ फिल्ममा अधिकांश दृश्य अस्पतालको खिच्नुपर्ने भएकाले भित्ता हटाउन वाइड दृश्य प्रयोग नगरेको दीपेन्द्रको तर्क छ ।
पशुपतिप्रसाद फेम्ड निर्देशक एवं लेखक निर्देशित आमा अर्को महिना रिलिज हुँदैछ । शर्मिला पाण्डेको निर्माण रहेको फिल्मले ट्रेलर वर्गाकार स्वरुपमै रिलिज गरेको थियो भने फिल्म पनि वर्गाकारमै प्रदर्शन हुने जनाइएको छ ।